I-Adobe ikhupha iCC CC ukwenza iiNdawo eziKhawulezayo neziLula | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umzuzwana odlulileyo ndikhankanye indlela iAdobe ethatha ngayo ngokungathandekiyo ukusungula iiapps ezahlukeneyo kwiVenkile yokudlala, njengoko bekunjalo Ingubo yepeyinti y Ukulungiswa kweefoto, ukwanelisa bonke abo bayili kunye nabayili abafuna ukuthatha ithuba izixhobo ezinamandla ngakumbi eziphathwayo kwaye oko kukuvumela ukonwabela ujongano olungcono kunye nezixhobo ezinamandla.
Nangona siza kuba nemida okwethutyana, iAdobe Comp CC sisixhobo esitsha esisungulwe izolo kwaye esikwaziyo ukubonelela ngezixhobo eziyimfuneko ukuze wenze ubeko lokwenyani olunemilo echaziweyo kunye nemigca kwimizobo ebukhali. Ungathatha ithuba lobume bevektha, imifanekiso, imibala, kunye nezitayile zokubhaliweyo ezivela kwiLayibrari yamafu ye-Adobe, kunye nezo zivela kwi-Adobe Typekit.
Le app ilifu lokuCoca iyakhonzwa ukuze ube nayo yonke imisebenzi ehleliweyo kwi-Intanethi ukuze utshintshe kwi-smartphone yakho uye kwithebhulethi yakho ukuze uqhubeke nolo luvo luye kuwe ngelixa ubusebhasini ubuyela ekhaya.
Ungazoba izimbo zomzimba ezinomdla yeComp ukuba ikhathalele ukuyiguqula ibe sisikwere okanye isangqa. Nje ukuba kwenziwe oku, uya kuthatha indawo yolawulo kwaye uya kuba nakho ukuyiguqula le fomu uyenzileyo ukuze ubume ngokuthe ngcembe uyilo okanye umzobo welogo okanye nawuphina umsebenzi ofuna umthengi wakho. Inika ukhetho lokusebenzisa iigridi, izikhokelo kunye nezixhobo zemaski ukufezekisa zonke iziphumo kwaye ke kwimizuzwana embalwa unomsebenzi ochaziweyo.
Olunye uhle kakhulu kukuba unako fikelela kwithala leencwadi leTypekit ukuba neefonti ezifanayo ozisebenzisayo kwiPC yakho. Oku kuthetha ukuba uya kuba nokulawula ngaphezulu komgca kunye nokushiyeka kweeleta, ubungakanani, ulungelelwaniso, nokunye okuninzi.
Okokugqibela uya kuthi thumela uyilo kwi-Photoshop CC, Illustrator CC kunye ne-InDesign CC ukuyigqiba ekhaya kunye neLaptop yakho okanye iPC. Inkqubo yasimahla efuna iakhawunti yeCloud yoyilo.
Khuphela iAdobe Comp CC kwi-Android/ kwi-iOS
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » IComp CC yinkqubo entsha yeAdobe yokudala uyilo olunemilo echaziweyo kunye nemigca